"တစ်လုံး"ကို မြန်မာငွေ သိန်း(၁၅၀)ကျော် ပေးနိုင်မှ စားခွင့်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး သခွားမွှေးသီး. . . » MPA
“တစ်လုံး”ကို မြန်မာငွေ သိန်း(၁၅၀)ကျော် ပေးနိုင်မှ စားခွင့်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး သခွားမွှေးသီး. . .
admin · Posted on March 12, 2019
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သစ်ဥသစ်ဖုတွေဆိုတာက ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုပြီး လူတွေကလက်ခံထားသလို WHOကလည်းကြောငြာထားပြီးသားမို့ အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အသီးအရွက်တွေလည်းရှိတယ်ဗျ။ အာနိသင်ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဓိကက ကုန်ဈေးနှုန်းကြောင့်ပါပဲ။
ဒီနေ့မှာတော့ အဲ့လိုဈေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ သစ်သီးတွေထဲက ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး သစ်သီးတစ်မျိုးအကြောင်းကို ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံလူတန်းစားတွေ အနားကပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ဒီအသီးအခြေတည်လာခဲ့တဲ့နေရာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ Yubariမြို့ ကပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Yubari King Melonလို့ အမည်နာမ တွင်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
ဒီသစ်သီးဟာ ဘာလို့ အဲ့လောက်ထိဈေးကြီးနေရတာလဲဆိုရင် သူက limited နဲ့သာ ထုတ်တဲ့အသီးလည်းဖြစ်သလို တစ်ပင်မှာသုံးလုံး ခန့်သာသီးတဲ့အသီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီအပင်တွေကို Green Houseထဲမှာစိုက်ပြီး ပိုးမွေးတယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုပြီး အသေးစိတ်ကျကျစိုက်ပျိုးထားခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလို့ Green Houseထဲမှာ စိုက်ရလဲဆိုရင် နေရောင်ရဲ့ ပူပြင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ပါတဲ့။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး ကျွေးတဲ့မြေသြဇာကအစ ဂရုတစိုက်နဲ့ သင့်တင့်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်မြေသြဇာတွေကို စနစ်တကျ ကျွေးရပြီးတော့ ခေတ်မှီ ကွန်ပြူတာ စက်ပစ္စည်း တွေနဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။
ဒီ Yubari Kingဟာ စားလိုက်ရတာနဲ့ ဆွေမျိုးမေ့သွားရလောက်အောင်ကို ချိုစိမ့်နေပြီးတော့ အရသာဟာ စွဲမက်ဖွယ်ရာကောင်းလွန်းလို့ တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကြဲ လူကုန်ထံတွေဆိုရင် တစ်လကို အလုံး (၂၀)လောက် Orderမှာပြီးတော့ကိုဝယ်စားကြသတဲ့။
တော်တော်ဖြုန်းနိုင်တဲ့လူတွေပါပဲ။ ဒီYubariရဲ့ဈေးနှုန်းဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သောင်း ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် သိန်း(၁၅၀)လောက်ရှိပါသတဲ့နော်။crd
Source : Yubari King Melon
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ သဈဥသဈဖုတှဆေိုတာက ကနျြးမာရေးအတှကျ အရမျးကောငျးတယျဆိုပွီး လူတှကေလကျခံထားသလို WHOကလညျးကွောငွာထားပွီးသားမို့ အားလုံး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကိုထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ အသီးအရှကျတှလေညျးရှိတယျဗြ။ အာနိသငျကွောငျ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျတာတော့မဟုတျဘူးဗြ။ အဓိကက ကုနျဈေးနှုနျးကွောငျ့ပါပဲ။
ဒီနမှေ့ာတော့ အဲ့လိုဈေးကွီးပါတယျဆိုတဲ့ သဈသီးတှထေဲက ကမ်ဘာဈေးအကွီးဆုံး သဈသီးတဈမြိုးအကွောငျးကို ပွောပွမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခွခေံလူတနျးစားတှေ အနားကပျခှငျ့မရှိတဲ့ ဒီအသီးအခွတေညျလာခဲ့တဲ့နရောကတော့ ဂပြနျနိုငျငံ Yubariမွို့ ကပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Yubari King Melonလို့ အမညျနာမ တှငျနရေတယျဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။
ဒီသဈသီးဟာ ဘာလို့ အဲ့လောကျထိဈေးကွီးနရေတာလဲဆိုရငျ သူက limited နဲ့သာ ထုတျတဲ့အသီးလညျးဖွဈသလို တဈပငျမှာသုံးလုံး ခနျ့သာသီးတဲ့အသီးလညျးဖွဈပါတယျ။
ပွီးတော့ ဒီအပငျတှကေို Green Houseထဲမှာစိုကျပွီး ပိုးမှေးတယျဆိုတာထကျကိုပိုပွီး အသေးစိတျကကြစြိုကျပြိုးထားခဲ့ရပါတယျ။ ဘာလို့ Green Houseထဲမှာ စိုကျရလဲဆိုရငျ နရေောငျရဲ့ ပူပွငျးမှုကို ကာကှယျနိုငျအောငျလို့ပါတဲ့။
ဒါတငျမကသေးပါဘူး ကြှေးတဲ့မွသွေဇာကအစ ဂရုတစိုကျနဲ့ သငျ့တငျ့တဲ့ကိုယျပိုငျဓာတျမွသွေဇာတှကေို စနဈတကြ ကြှေးရပွီးတော့ ခတျေမှီ ကှနျပွူတာ စကျပစ်စညျး တှနေဲ့ စောငျ့ရှောကျမှုတှပွေုလုပျပေးရပါတယျ။
ဒီ Yubari Kingဟာ စားလိုကျရတာနဲ့ ဆှမြေိုးမသှေ့ားရလောကျအောငျကို ခြိုစိမျ့နပွေီးတော့ အရသာဟာ စှဲမကျဖှယျရာကောငျးလှနျးလို့ တကယျ့ ဒိတျဒိတျကွဲကွဲ လူကုနျထံတှဆေိုရငျ တဈလကို အလုံး (၂၀)လောကျ Orderမှာပွီးတော့ကိုဝယျစားကွသတဲ့။
တျောတျောဖွုနျးနိုငျတဲ့လူတှပေါပဲ။ ဒီYubariရဲ့ဈေးနှုနျးဟာ အမရေိကနျ ဒျေါလာ တဈသောငျး ဝနျးကငျြရှိပွီးတော့ မွနျမာငှနေဲ့ဆိုရငျ သိနျး(၁၅၀)လောကျရှိပါသတဲ့နျော။crd
Celebrity, Knowledge, Literature, News, Uncategorized, Wonders